Vidim-bary : Nihena 4 000 Ar ny iray kitapo -
AccueilRaharaham-pirenenaVidim-bary : Nihena 4 000 Ar ny iray kitapo
Tao anatin’ny herinandro monja dia nahitana fihenany be ny vidim-bary eny amin’ny tsenan’Anosibe. Raha ho an’ny vary “importé” na nafarana tokoa mantsy, dia nahitana fihenana 4 000 Ariary isaka ny gony, na isaka ny kitapo izany. Raha 82 000 Ariary ny vary iray kitapo milanja 50 Kg amin’ireny vary nafarana ireny tamin’ny herinandro, dia tafidina 78 000 Ariary izany ankehitriny etsy amin’ny tsenan’Anosibe. Izany hoe any amin’ny 1560 Ariary ny vidin’ny iray kilao. “Tsy hitsahatra hidina io vidim-bary io satria efa ho avy ihany koa izao ny sambo lehibe iray izay tsy mitondra afa-tsy vary fotsiny. Higadona ao Toamasina atsy ho atsy io sambo lehibe io. Heverina fa hanala fahasahiranana ho an’ny vahoaka malagasy ny fahabetsahan’ny vary miparitaka eny an-tsena”, raha ny fanazavan’ny minisitry ny Varotra sy ny Fanjifana Chabani Nourdine.
Tsy ny vary nafarana ihany no nahitana fidinany, fa ny vary gasy vokarina eto an-toerana ihany koa. Ny 06 desambra 2017 teo, dia 111 000 Ariary no vidin’ny vary iray kitapo 50 kg , izany hoe namidy 2220 Ariary ny iray kilao. Nidina ho 105 000 Ariary kosa ny iray kitapo milanga 50 kilao amin’izany ankehitriny, izany hoe 2100 Ariary ny iray kilao. Raha 114 000 Ariary kosa ny iray gony 50 kg amin’ny vary gasy teo aloha, izany hoe 2280 Ariary ny kilao, dia nidina ho 105 000 Ariary ny iray kitapo 50 kg , nidina 2 100 Ariary ny iray kilao. Tsy tongatonga ho azy izao fidinan’ny vidim-bary izao fa vokatry ny ezaka maro. Saika ho isan’andro dia nitady hevitra hiadiana amin’ny fidangan’ny vidim-bary hatrany ny minisiteran’ny Varotra, izay tena voakasiky ny fanaraha-mason’ny vidim-bary.
Tsy ny vidim-bary ihany moa no nahitana fihenany, fa hatramin’ny vidin’ny entana ilaina andavanandro toy ny menaka sy ny lafarinina ary ny siramamy. Satria tokoa, raha 125 000 Ariary ny vidin’ny lafarinina 50 Kg tamin’ny volana jolay lasa teo, dia nidina 76 000 Ariary izany amin’izao volana desambra izao. Izany hoe raha 2500 Ariary ny kilaon’ny lafarinina taloha dia efa nidina 1520 Ariary izany amin’izao.
Nidina koa ny vidin’ny siramamy. Raha 150 000 Ariary ny siramamy iray kitapo ( 50 kg), dia nidina 100 000 Ariary izany amin’izao volana desambra izao. Izany hoe nahitana fidinany 50 000 Ariary be izao. Raha 3 000 Ariary izany ny vidin’ny siramamy iray kilao dia efa nidina 2 000 Ariary izany ankehitriny. Toa izany koa ny vidin’ny menaka. Raha 4 000 ariary ny vidin’ny menaka iray litatra ny volana jolay teo dia 3 500 Ariary izany amin’izao volana desambra izao.
Raha ny sitrapon’ny eo anivon’ny minisiteran’ny Varotra sy ny Fanjifana moa dia ny hampidina hatrany ny entana ilain’ny olona andavanandro sy hampidina ny vidim-bary , saingy misy koa ny “mafia” amin’io taranja io, izay tsy mitsahatra hanao izay hampakatra ny vidin’entana sy mitady tombony mihoa-pampana . Efa samy mahafantatra ny tena vidim-bary izany izao ny rehetra, ka inoana marimarina fa tsy ho voafitaky ny mpanararaotra.